Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao Karaiba • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • fanarenana ny dia • Naotin'i Resort • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Tiorka sy Caicos
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Tiorka sy Caicos » Nosy Turks sy Caicos dia namoaka fanamarihana ambaratonga voalohany avy amin'ny CDC
Maherin'ny 65% ​​-n'ny olon-dehibe eo an-toerana no vita vaksiny, mahatonga ny Nosy Turks sy Caicos ho iray amin'ireo firenena be mpindrana indrindra eto an-tany.
Ny Nosy Turks sy Caicos dia nahazo fampandrenesana ambaratonga 1 avy amin'ny Centres for Disease Control
Ny fampandrenesana momba ny fahasalamana momba ny dia an-tany vaovao dia maneho dingana lehibe iray amin'ny fampielezana vaksinin'ny Nosy Turks sy Caicos
Ny tahan'ny fanaovana vaksiny matanjaka ao amin'ny firenena miampy ny fahombiazan'ny protokol fiarovana azy ireo dia nanakana ny fiparitahan'ny COVID-19
Ny Birao fizahan-tany Turks sy Caicos Islands, tompon'andraikitra fizahan-tany manokana ho an'ny Nosy Turks sy Caicos, dia nanambara fa nahazo ny fanairana Alert 1 avy amin'ny Ivotoerana fanaraha-maso ny aretina (CDC). Ny fampandrenesana momba ny fahasalamana momba ny dia an-tany vaovao dia maneho ny dingana lehibe iray tamin'ny fampielezana vaksinin'ny Nosy Turks sy Caicos, nanomboka ny volana Janoary 2021 ary nahatratra 65 isan-jaton'ny olon-dehibe no nahazo fatra farafaharatsiny iray tamin'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech izy io dia iray amin'ireo firenena be mpindrana indrindra eto an-tany.
Ny tahan'ny fanaovana vaksiny matanjaka ao amin'ny firenena miampy ny fahombiazan'ny protokol fiarovana azy ireo dia nanakana ny fiparitahan'ny COVID-19 ary navela hitety soa aman-tsara any amin'ireo Nosy Turks sy Caicos. Ny toerana dia nankafy ny tahan'ny fivezivezena mafy tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, ao anatin'izany ny salan'isa maherin'ny 70 isan-jato ho an'ny aprily 2021.
"Tena reharehantsika fa ny ankamaroan'ny olondehibe efa vaksiny, manampy anay hitazonana ny fisolahana mba hahazoana mari-pahaizana Alert 1 avy amin'ny CDC ho an'ny dia soa aman-tsara any amin'ny Nosy Turks sy Caicos," hoy i Hon. Josephine Connolly, minisitry ny fizahantany. “Faly izahay fa mpiara-miombon'antoka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany amin'ny fanohanana ny ezaka ataon'ireo Nosy Turks sy Caicos amin'ny alàlan'ny fananganana fampielezan-kevitra manokana ho an'ny fananana, ary ho an'ny fiarahamonina noho ny fiambenan'izy ireo amin'ny fanaovana vaksiny sy fanajana ny fombafomba. Mbola mila mpizaha tany iraisam-pirenena izahay hahazo fankatoavana avy amin'ny Azo antoka TCI, vavahadin-tsoratry ny kalitao, alohan'ny hitsidihanay ireo nosy mba hiantohana ny fiadanam-bahoaka. ”
Ny vaovao momba ny fanairana CDC haavo 1 dia tonga taorian'ny tatitra farany nataon'ny minisiteran'ny fahasalamana sy ny serivisy mahaolona fa 65 isan-jaton'ny olon-dehibe no nahazo ny fatra voalohany tamin'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech COVID-19. Ho fanampin'izay, 55 isan-jaton'ny olon-dehibe izao no vita vaksiny feno rehefa nahazo vaksininy roa.
Ireto antontan'isa matanjaka ireto dia miresaka ny amin'ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitry ny vaksinin'ny governemanta Turks sy Caicos Islands, izay nahitana takelaka famporisihana fanaovana vaksiny manerana ny nosy; fandrisihana ahafahan'ny orinasa manana mpiasa vita vaksiny feno hiasa amin'ny toerana ambony; ary fandraisana andraikitra ataon'ireo mpiaramiasa amin'ny hotely, trano fisakafoanana ary mpizahatany mpizahatany izay manentana ny mpiara-miasa aminy hanao vaksiny, miampy fanomezana matetika, mba hiarovana ny tenany sy ny hafa. Ankoatr'izay, ny Nosy Turks sy Caicos dia nanohana hatrany ireo kaody fiarovana azy ireo amin'ny fenitra eken'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ho fanampin'ny fampandrenesana haavo 1 azy, ny Nosy Tiorka sy Caicos dia nahazo ny Safe Travels Stamp avy amin'ny World Travel Council, izay midika fa ny protokolan'ny fiarovana azy efa misy dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana napetraky ny WTTC, miaraka amin'ireo governemanta sy ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana, izay natao hanara-penitra ny dia tsara. Anisan'izany ny, fa tsy ferana fotsiny, amin'ny fanentanana ny halaviran'ny vatana, ny fanamafisana ny fetran'ny fahafaha-manao, ny fanaovana sarontava amin'ny toerana ampahibemaso, ary ny fiantohana ny teknika fanasan-tanana sy ny fanadiovana araka ny tokony ho izy, ankoatry ny fepetra takiana amin'ny 'Safe Travels'.
Ny Nosy Turks sy Caicos dia niambina hatrany ary tsy miovaova momba ny fepetra takiana amin'ny mpandeha iraisampirenena, izay mitovy amin'ny mpandeha vita vaksiny sy tsy vita vaksiny. Ny TCI Assured ao amin'ny firenena, vavahady fiantohana kalitao ao amin'ny tranokalan'ny Turks and Caicos Islands Tourist Board, dia manome alàlana fitsangatsanganana rehefa avy nanome porofo ny valin'ny fitsapana COVID-19 PCR ratsy avy amin'ny toeram-pitsaboana iray nahazo fankatoavana ao anatin'ny dimy andro mialoha ny nahatongavan'izy ireo ny toerana halehany, porofon'ny fiantohana ara-pahasalamana izay manarona ny vidin'ny fitsaboana COVID-19 sy ny fangatahana fanadihadiana momba ny fahasalamana. Ny vanim-potoana quarantine 14 andro dia tsy takiana amin'ireo mpitsidika raha vao nanaporofo izy ireo fa ratsy ilay virus.
Rehefa tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina dia afaka manantena ny hampiseho kopian'izy ireo ny mpitsidika Azo antoka TCI fanamarinana amin'ny tompon'andraikitra eo an-toerana, izay samy manao fitaovam-piarovana manokana, alohan'ny handehanana amin'ny fifindra-monina izay hisehoan'ny fizahana mari-pana ho an'ny mpandeha tsirairay. Rehefa lasa dia ny ankamaroan'ny mpandeha dia takiana ankehitriny hanome porofon'ny fitsapana COVID-19 ratsy mba hahafahana miverina amin'ny firenena niaviany; trano fandraisam-bahiny maro manerana ny Nosy izao no manana tranokala fanandramana eo an-toerana, mamela traikefa mora sy milamina.
Ny Nosy Turks sy Caicos - fonenan'ny "Beach tsara indrindra eran-tany" - dia fialan-tsasatra ankafizin'ny kintana dimy fialan-tsasatra ho an'ny fialamboly, orinasa ary vahiny malaza manerantany. Miaraka amin'ny nosy lehibe sivy sy nosy kely manodidina ny 40 ary cays tsy misy mponina, ny toerana itodiana dia azo antoka ho an'ny fitsangatsanganana amin'ity paradigma vaovao ny fandehanana ara-batana ity, raha jerena ny fiparitahany, ny tontolo iainana mahavariana, ny fiainana manokana, ny trano fandraisam-bahiny malalaka, ary ny portfolio tsy manam-paharoa amin'ireo villa tsy miankina tsy manam-paharoa fialan-tsasatry ny nosy tsy miankina. Ny lisitr'ireo toeram-pitsapana COVID-19 manerana ny Nosy Rahavavy dia hita ao amin'ny tranokalan'ny Tourist Board.